Sidan ayaan u qiimeyneynaa sida aad degdeg shaqo ugu heli kartid iyo taageerada aad u baahantahay
Marka aad isku qortid Xafiiska shaqada (Arbetsförmedlingen) waxaan qiimeyn ku sameyneynaa sida aad shaqo dhakhso ugu heli kartid iyo taageerada aad u baahantihid. Waxaan adeegsaneynaa tirakoob taageero qiimeyn ahaan. Waa maareyn ootomaatig ah oo lagu sameynayo macluumaadka shakhsiga ah, waxayna ku dhisantahay macluumaadkii aad noo soo gudbisay. Ulajeeddadu waa in lagaa caawiyo in aad shaqo u heshid sida ugu dhakhso badan ee suurta gal ah.
Taageerada qiimeynta ee tirakoobka ah
Waxa aad halka ka daawan kartaa filin gaaban oo sharraxaya sida ay shaqayso taageerada qiimeynta ee tirakoobka ah.
Muxuu yahay macluumaadka aan adeegsaneyno?
Waxaan marka aan si ootomaatig ah wax u qiimeyneyno adeegsaneynaa macluumaadka aad isku qortay iyo macluumaad kale oo adiga kugu saabsan oo nidaamkeenna ku jira. Waxay noqon karaan waqtiga is qorista, waxbarashada, da’da iyo duruufaha aagga aad deggantahay. Tusaale ahaan in aad waqti dheer ku qornaatid xafiiska shaqada ,wuxuu muujinayaa in aad ka fogtahay suuqa shaqada. Maareynta waxaa loogu yeeraa muujinta dhinacyada kala duduwan ee qofka, waxayna sharci ahaan ka dhigantahay in si ootomaatig ah maareyn loogu sameynayo macluumaadka qof ahaaneed si loo sameeyo qiimeyn, loona saadaaliyo sifooyin go’an oo qof ahaaneed.
Xafiiska shaqadu wuxuu xitaa macluumaad ka soo qaadan karayaa hey’ado kale oo dowladeed, tusaale ahaan Laanta socdaalka.
Waa kuwan macluumaadka aan adeegsaneyno
Dalka lagu dhashay
Kooxaha xirfada ee la raadiyay (ilaa iyo 4 xabo)
Qasnadda shaqo la’aanta ee laga tirsanyahay
Bisha la is diiwaan geliyay
Tirada ayaamaha qofku diiwaan gashanaa intii lagu jiray wakhtigii hore ee diiwaan gelinta
Tirada ayaamaha ka soo wareegtay ka dib marka qofku diiwaan gashanaa muddadi hore
Tirada ayaamaha ee qofku helay caawimaadyo intii lagu jiray wakhtiyadi hore ee la diiwaan gashanaa
Nooca barnaamijyada kala duwan ee qofku ka soo qayb-qaatay wakhtiyadi hore
Wakhtiyadi la diiwaan gasshanaa
Nooca hoos u dhaca awooda laxaadka
Macluumaadka kale ee aan ahayn macluumaad shakhsi laakiin xitaa loo isticmaalo taageerada qiimeynta
Macluumaadka tirakoobka SCB
Heerka shaqo la’aanta ee aaga lambarka boosta
Dakhliga cel-celis ahaan ee aaga lambarka boosta
Heerka waxbarasho ee aaga lambarka boosta
U kala qaybsanaanta dalka loo dhashay ee aaga boosta
Tirada guryaha qof keliya ku noolyahay ee aaga boosta
Baahida aad taageero u qabtid
Wuxuu Xafiiska shaqadu u arkaa in macluumaadkan ay yihiin kuwo iminka ku khuseeya si go’aan looga gaaro masaafada aad u jirtid suuqa dhaqada, sida aad degdeg shaqo ugu heli kartid iyo taageerada aad u baahantahay. Waxaan adeegsaneynaa taageeraha qiimeynta la xiriirta tirakoobka si go’aan looga gaaro in adeegga diyaarinta iyo wax la raadintu uu taageero sax ah ku siin karyo.
Seddax qeybood oo taageero
Taageeraha qiimeyntu wuxuu Xafiiska shaqada u soo jeedinayaa heerka taageero ee aad u baahantahay. Heerarku waa:
Waxaa loo arkaa in aad baahi yar u qabtid taageero oo aad isku filantahay adigoo tusaale ahaan kaashanaya adeegyada dijitaalka ee Xafiiska shaqada.
Waxaad u baahantahay taageero dheeraad ah si aad shaqo u heshid ama u billawdid waxbarasho.
Waxaad u baahantahay taageero qoto dheer oo uu Xafiiska shaqadu sii baari doono.
Taageerada adiga kugu habboon
Xafiiska shaqadu wuxuu markaas ka dib sameynayaa qiimeyn, isagoo ka duulaya dhammaan xogaha aan kaa heyno iyo waxa uu taageeraha qiimeyntu soo jeediyo, wuxuuna dabadeed gaarayaa go’aan ku aaddan taageerada lagu siinayo, tan ay tahay.. Ulajeeddadu waa in aad hesho taageerada ugu wanaagsan ee suurta gal ah.
Waxyaabo laguu soo dirayo
Wuxuu xitaa Xafiiska shaqadu isticmaali doonaa xogahaaga shakhsiga ah si uu kuugu soo diro macluumaad aan u maleyneyno in aad daneyneysid oo ah kuwo khuseeyo shaqo raadintaada. Haddii aadan rabin in aad hesho wargeyska wararka cusub waad iska joojin kartaa in la soo diro.
Macluumaadkaagu waa ay ilaashanyihiin
Macluumaadka aad u gudbineysid Xafiiska shaqadu waxay soo gelayaan sirta la qariyo oo waxaa tusaale ahaan loo maareynayaa si waafaqsan xeerka ilaalinta macluumaadka ee (GDPR). Macluumaadka kugu saabsan waa la baabi’in doonaa saddex sano ka dib marka ay dhammaato baahida arrinkaaga loo qabo. Macluumaadkii gooni loo soocay si loo soo saaray tirakoob waxaa la baabi’inayaa toban sano soocitaanka ka dib. Macluumaadka waxaa maareyn kara oo keliya shaqaale ehel u ah.
Dhammaan maareynta macluumaadku waa in ay ku saleysantahay xeerarka macluumaadka shakhsiga ah. Wuxuu Xafiiska shaqadu sameynayaa muujinta waxa uu qofku yahay isagoo kaashanaya xeerka aasaasiga ah ee ’’danta guud’’ iyo ’’adeegsashada awoodda sargaalnimo’’. Waxa keliya ee looga golleeyahay maareynta macluumaadku waa in kiiska la maamulo.
Muujinta qofku (profilering) waxa uu yahay waxaa sharci ahaan looga golleeyahay maareyn ootomaatig ah oo macluumaadka shakhsiga ah oo la adeegsanayo si loo qiimeeyo sifooyinka qof ahaaneed ee qofka, gaar ahaan si loo lafa guro ama loo saadaaliyo tusaale ahaan xaaladda dhaqaale, waxyaabaha uu qofku door bidayo, daneynta, habdhaqanka ama xaafadda meesha uu qofku degganyahay.
Halkan waxaa ku jira macluumaad dheeraad ah oo ku aaddan sida uu Xafiiska shaqadu u maareynayo macluumaadkaaga shakhsiga ah iyo xuquuqda aad leedahay adigaaga la diiwaan geliyay.
Sidan ayaanu u maareynaa macluumaadkaaga shakhsiga ah